Kutheni sifuna iNicotinamide Mononucleotide (NMN)
Nangona ukwaluphala akunakugwenywa, kukho amathemba okutshintsha inkqubo, enkosi INicotinamide Mononucleotide (i-NMN). Ukuphila ebudaleni obudala liphupha lomntu wonke kwaye kukho izinto ezifana ne-NMN ezisinceda ukuba sifezekise eli phupha.
Ndiyazi ukuba niyazibuza ukuba ingaba eli candelo lihambelana njani nokwaluphala. Ewe, bamba imipu yakho kuba ndiza kukuthatha ngoncedo lwe-nicotinamide mononucleotide.
I-Nicotinamide Mononucleotide (NMN) ngumandisi we-NAD +. I-NAD + yi-biomarker ebalulekileyo kwiseli yomntu. Njengoko sisiya siqhubeka iminyaka, le khemikhali iyancipha ngenxa yemisebenzi eliqela ye-enzymatic. Ngaphezu koko, umgangatho wokusetyenziswa uhlala uhlala ngokungangqinelaniyo kumgangatho wemveliso.
Into ebalulekileyo ekufuneka uyiqaphele kukuba, ngokungafaniyo nonyango oluninzi ngokuchasene nokwaluphala olukushiya uneempawu ezinganyangekiyo, Iziphumo ebezingalindelekanga zeNMN basondele kwi-null. Ndivumele ndikhuphe ukukhanya malunga nendlela i-NMN ekuchaphazela ngayo ubomi bakho.
Yintoni iNicotinamide Mononucleotide (NMN)
I-Nikotinamide Mononucleotide (Nmn) umgubo1094-61-7) ivela kwi-niacin. Yimveliso evela ekuphenduleni phakathi kwenicotinamide ribose kunye neqela le-phosphate. Ikhompawundi idlala indima ebalulekileyo kwi-biosynthesis ye-NAD + (nicotinamide adenine dinucleotide), ebaluleke kakhulu kwimisebenzi yeselfowuni.
Kwi-NAD +, i-Nicotinamide Mononucleotide powder powder isebenza njenge-substrate ye-nicotinamide mononucleotide adenylyltransferase, eyi-enzyme ejongene nokuguqula i-NAD +.
I-NMN uphakathi kwemithombo ebalulekileyo yamandla eselula ngaphakathi komzimba womntu. Kuba ilandulelo lweNAD +, ukuhla kwecandelo elinye kuya kuyichaphazela kakubi enye.
Kwizifundo zamva nje, iNicotinamide Mononucleotide iqinisekisile ukuba iyinxalenye yesiza sonyango. Olunye utshintsho olwenziweyo kukuqondwa kwendima enkulu yecandelo lokubuyisa isidima kunye nokubamba inkqubo yokuguga.
Kutshanje, kukho uphando oluthembisayo malunga nolawulo lomhlaza wenicotinamide mononucleotide.
Ukutya kukuqukethe iNicotinamide Mononucleotide (NMN)
I-Wisepower inamandla amakhulu emveliso ye-NMN kunye ne-NR powder,
Imveliso yenyanga ngenyanga ukuya kwi-2,000KG.
Zeziphi IziBonelelo zeNicotinamide Mononucleotide (NMN)
Uya kuvuma nam ukuba indala kunye neenwele ezingwevu ziyahambelana nobulumko. Nangona kunjalo, uvuyo lweli nqanaba lihlala ixesha elincinci xa uqala ukuba namaxesha aphezulu. Njengoko sisiya phambili ebudaleni, imizimba yethu iguquka ibe yinyani yezifo.
Ukwaluphala kushiya impembelelo enkulu kwimisebenzi yeselula. Umzekelo, amanqanaba e-NAD + kunye neNicotinamide Mononucleotide aceba ukubuyela umva ngexesha legolide. Nangona umzimba usasebenza ngekhemikhali, inqanaba lokusetyenziswa liphezulu kakhulu kunesantya sokuphinda wenzwe.
Kwimeko yomonakalo weDNA, i-NAD + isebenzela i-PARP1, iproteni yokulungisa i-DNA, ukubuyisela amalungu achaphazelekayo.
Ukwehla kwe-NMN kuchaphazela amanqanaba e-NAD + kwaye emva koko kukhokelela ekunciphiseni kwemveliso yamandla yi-mitochondria.
Izifundo zophando ezenziwa nguGqirha Sinclair, ugqirha wemfuzo kwiDyunivesithi yaseHavard, uqinisekisa ukusebenza kakuhle kwenicotinamide mononucleotide supplement ekunciphiseni ukuguga. Umphengululi uyavuma ukuba yena notata wakhe bayasithatha isongezo kwaye ngokuqinisekileyo siphucula inkumbulo kwaye silola nengqondo yabo.
Unyango lweSifo seswekile II
Ukwehla kwenqanaba le-nicotinamide adenine dinucleotide kunokubangela uhlobo lweswekile yesibini.
Ukulawula iNicotinamide Mononucleotide kuya kuphucula kakhulu ukunganyamezelani kweswekile kunye nokuziva kwe-insulin kwizigulana ezinesifo seswekile. Ngaphandle koko, ezinye izazi zemfuza ziye zacinga ukuba unyango luguqula ukubonakaliswa kofuzo ngenxa yokutya okunamafutha aphezulu.
Xa amanqanaba e-nicotinamide adenine dinucleotide ewa, imeko yengqondo ilele emngciphekweni.
Ukulawula i-NMN kwandisa ubungakanani be NAD +, kungoko ukukhusela ingqondo kumonakalo. Ngamafutshane, iNicotinamide Mononucleotide izuzisa imisebenzi ye-neuronal kunye nengqondo, kubandakanya, ukufunda kunye nememori.
Ngesi sizathu, unyango lusetyenziselwa ukulawula isifo se-Alzheimer, isifo sikaParkinson's syndrome, isifo sengqondo esixhalabisayo.
Uhlolisiso oluthile lweevawutsha zingentla izibonelelo ze-nicotinamide mononucleotide ngokuqinisekisa ukuba isongezelelo sisebenza ngokufanelekileyo kumonakalo wangaphakathi. Xa abaphandi belawula le dosi kwiimpuku ezindala, izifundo zibhalise ukuphuculwa okukhulu kwimveliso ye-Nracerebral NAD +. Ngenxa yoko, kwabakho ukuncitshiswa okwalandela ekubethweni kwe-ischemic kunye nosulelo lobuchwephesha.
Inqanaba le-NMN eyi-Optimum emzimbeni liguqulela kunyuso lwe-NAD +, elawula amandla emisebenzi ye-metabolic, ukulungiswa kwe-DNA kunye nokuphendula koxinzelelo. Ukusukela Nicotinamide Mononucleotide ichaphazela ngokuthe ngqo imetabolism, ukusilela kwayo kuya kubangela iimeko ezininzi zokutya okunje ngokutyeba, isifo seswekile, isibindi esinamanqatha kunye nedyslipidemia.
Kwimeko yokunganyamezeli kwe-glucose, i-NMN inyathelo lokuphucula iswekile.
Uphando luqinisekisa ukuba ungaphulukana ne-10% yomzimba wakho ukuba uthatha i-NMN. Njengoko uGqr. Sinclair eyibeka, impembelelo yedosi enye ye-NMN ebantwini ilingana nokubaleka ukunyathela.
Khohlwa malunga neetoni zeekiti zokwenza imichiza kunye noqhaqho lobuso ezikushiya unokubetheka okunganyamezelekiyo.
Njengoko inzululwazi ibeka, sibudala njengeearthors zethu. Ngale ntetho, ungathobela ukuba ukuguqula umva we-vascular atrophy kunye ne-senescence yemithambo yegazi yethu kuya kudlala ubuqili kwixesha lethu lobomi.
Eyona nto eyahlula ubutsha kubutsha kukukomelela kunye nokunyamezeleka kwemisipha. Nangona zonke ezi mpawu ziphucuka ngokuzivocavoca rhoqo, i-senescence defes the odds kunye nezihlunu zomzimba ziba buthathaka ngelixa ukuhamba kwegazi kuncipha ngaphakathi kwezi nkqubo.
Ndivumele ndicacise ngokwembono yesayensi. Xa iiseli ze-endothelial zesifo somntu ziphulukana neeprotein ze-Sirtuin1, ukuphuma kwegazi kuya kwehla kakhulu. Kuya kufuneka uqonde ukuba i-NMN ngumlawuli ophambili we-SIRT1. Ke ngoko, ukuphatha esi songezelelo kuya kusebenzisa i-Sirtuin-signaling, eya kuthi ivelise ii-capillaries ezintsha ukubonelela ngeoksijini kunye nezondlo kwimisipha kunye namanye amalungu abalulekileyo.
I-NMN Vs NR
Ke, yintoni yonke le malunga nicotinamide mononucleotide vs riboside?
Ewe, bobabini bangabanduleli beNAD +.
Ukujonga izixhobo zabo zamachiza kuya kukuxelela ukuba i-NMN inobungakanani beemolekyuli ezinkulu kune-NR. Ke, I-nicotinamide riboside ungayenza emzimbeni womntu ngaphandle kwesidingo sokwaphula yonke i-molekyuli yayo.
Nangona kunjalo, kukho ukubambeka kwethemba xa uphononongo lwakutshanje luqinisekisile ukuba kukho into yokudlulisela engaqondakaliyo evumela ukuba ikhemikhali idlule kwinkqubo yokugaya. Izifundo zakuqala zibhengeze oku kungenzeka ukuba ezinye izazinzulu zifumanise iprotheyini ye-Scl12a8, encedisa ukuguqulwa kwe-NMN ibe yi-nicotinamide adenine dinucleotide.
Uninzi lwabasebenzisi bafumanisa ukuba ixabiso le-nicotinamide mononucleotide liphezulu kancinci kunaleyo ye-riboside.
I-Nicotinamide Mononucleotide (NMN) yoPhando
Nangona kukho izifundo ezininzi zophando kwaye zinzulu Uphengululo longezelelo lweNMN ukusukela oko yafunyanwa ngo-1963, ndicela undivumele ndichukumise iiprojekthi ezibalulekileyo.
I-NMN ixhasa ubutsha
Ukusukela ngo-2013, uGqirha Sinclair ebesoloko ebandakanyeka ekufundeni i Nicotinamide Mononucleotide ukuxhasa kunye nendima yayo njengenkxaso yokuguga. Kwiphepha lakhe lophando, i-geneticist yaqaphela ukuba unyango luphucule amandla emisipha kunye nokuchithwa kweemodeli zeempuku. Ugqirha Sinclair uthelekise ukusebenza kwe-NMN nokusebenza.
Ngophando, olu luhlobo lweHarvard aluzange lurekhode iziphumo ezibi zeNMN.
Indima yokhuselo ye-Cardio ye-NMN
Kuphando olongezelelekileyo lwe-NMN lowama-2014, uYamamoto kunye nabalingane bakhe banquma ukuba i-NMN ineempawu zokukhusela i-Cardio. Ukulawula isongezelelo kuya kukhusela intliziyo kwimpazamo kunye nokulimala kwe-ischemic.
Kwiminyaka emibini kamva, uDe Picciotto kunye nofuzo yakhe bafumanisa ukuba i-NMN inokukhuthaza ukusebenza kwe-vascular.
I-NMN idibanisa i-Neurodegeneration
Ngo-2015, u-Long kunye neqela lakhe baqaphela ukuba i-NMN supplement inokuyinyanga i-Alzheimer's kwaye inciphise iimpawu zayo ezimbi. Kunyaka kamva, uWang kunye neqela lakhe lezenzululwazi bagqiba kwelokuba unyango luyakunyanga ukungahambi kakuhle kwengqondo kunye nokuchaphazeleka kwengqondo.
Kwiminyaka elandelayo, izazinzulu zophando ze-NMN zize ukuxhasa ukusebenza kweNicotinamide Mononucleotide ekuphuculeni imisebenzi yokuqonda.
I-NMN inyusa imisebenzi yePhysical and Immunological
Ngo-2013, ii-Mills kunye neqela lakhe bafumanisa ukuba i-nicotinamide mononucleotide (NMN) inokulawula uhlobo lweswekile lwesibini. Kwiminyaka emithathu kamva, wafumanisa ukuba izongezo zokubala zinomzimba kunye nokwehla kwe-immunological kwiimpuku ezindala. Kwakuloo nyaka, ii-Mills zadibana noYoshino kunye no-Imai ukuze bafunde indlela i-NMN echaphazela ngayo i-vascularity kunye nendima yayo kuxinzelelo lwe-oxidative.
I-NMN eThunyelwayo eyimfihlakalo
U-Imai neqela le-biochemists bafumanisa i-Slc12a8, encedisa ekunyuselweni kweNicotinamide Mononucleotide emzimbeni. Inkqubo iyakhawuleza kwaye ayizukuchaphazela bioavailability ye-NMN.
Ukusukela ngonyaka ka-2017, Izazi zaseKeio (eTokyo) naseYunivesithi yaseWashington bezibandakanye inxaxheba kwizilingo zekliniki ze-NMN phakathi kwabantu abadala kodwa abanempilo.
Iinjongo zezi zilingo zoluntu kukuseka ukhuseleko lwe-nicotinamide mononucleotide kunye nokuqonda ukuba isongezelelo siyichaphazela njani imisebenzi ye-beta-cell. Ngaphandle koko, izazinzulu zophando ziye zafuna ukuqonda ukuba zazikho na Iziphumo ezongeziweyo zeNMN.
I-Nicotinamide Mononucleotide (NMN) Umthamo
Mhlawumbi umbuzo obalekisa engqondweni yakho uthi, "Yimalini iNMN endifanele ukuyithatha?" Kulungile, makhe ndiyaphulele kuwe.
Umthamo oqhelekileyo we-NMN ebantwini umalunga ne-25mg kunye nama-300mg ngosuku. Kuzo zonke izilingo zeklinikhi ezikhoyo, izifundo ziya kuthatha ubuninzi be-250mg / ngosuku.
Ugqirha Sinclair uyavuma ukuba uthatha malunga ne-750mg ye-NMN ngemini. Ukuba ucwangcisa uphononongo lokongeza lwe-NMN kwi-intanethi, uyakuqonda ukuba abanye abasebenzisi benyuka baye kwi-1000mg / ngosuku. Nangona zingekho iirekhodi ezaziwayo zeziphumo ze-nicotinamide mononucleotide, kuya kufuneka unamathele kweyona idosi iphantsi kangangoko kunokwenzeka.
Ngaba iNikotinamide Mononucleotide (NMN) ikhuselekile
Ukuza kuthi ga ngoku, akukho datha yokumangalela iNicotinamide Mononucleotide njengengakhuselekanga. Ukusuka kwiirekhodi ezipapashwe ngexesha lovavanyo lweklinikhi, akukho sifundo sibhalisileyo nasiphi na isiphumo esibi se-nicotinamide mononucleotide. Ngapha koko izifundo zaphambi kokuba ziphumelele ngaphandle kokurekhoda naziphi na iimpawu ezibi.
Isongezelelo seNicotinamide Mononucleotide (NMN)
Kuba i-nicotinamide mononucleotide ayifumananga kugunyaziso olupheleleyo yi-FDA, ayinakuba sisiyobisi esikhutshiweyo. Nangona kunjalo, ungayithatha njenge yokutya.
Nangona ungayifumana kwiivenkile zeziyobisi zasekhaya, eyona ndawo ifanelekileyo yokuthenga imveliso ikwi-Intanethi. Ungathenga i-nicotinamide mononucleotide powder eninzi kuphando lwakho okanye uye kwisongezo sokutya. Nangona kunjalo, qiniseka ukuba uthenga ezivenkileni ezisemthethweni kumthengisi we-beta-nicotinamide mononucleotide.
Ukunyusa i-bioavailability ye-NMN, kuya kufuneka ukhethe iipilisi ezingezolwimi ezingakumbi kuneetafile zomlomo.
Ngokwemigangatho ye-FDA, umntu kufuneka okungenani abe yi-560mg yeNicotinamide Mononucleotide ngosuku. Yintoni ekufuneka uyazi ukuba i-broccoli kunye neklabishi zibhalisa ubuninzi be-NMN ngokuthelekiswa nokunye ukutya kunye neziqhamo.
Umzekelo, i-broccoli iqulethe phakathi kwe-0.25mg kunye ne-1.12mg yemichiza. Ke, ukuba ufuna ukugcina imeko esempilweni kunye nokuthobela iimfuno ze-FDA, kuyakufuneka usebenzise iiponti ezili-1500 ze-broccoli ngosuku. Kuba ukwenza njalo kunzima kakhulu, kuya kufuneka ukhethe ukuthenga isongezelelo kumthengisi we-beta-nicotinamide mononucleotide.
Yao, Z., et al. (2017). INicotinamide Mononucleotide inhibela ukwenziwa kweJNK ukubuyisa isifo seAlzheimer.
UYoshino, uJ., Et al. (2011). I-Nicotinamide Mononucleotide, iNAD ephambili (+) ephakathi, Iphatha i-pathophysiology yokutya kunye nesifo seswekile esikudala kwi-Mice. Cell Metabolism.
Yamamoto, T., et al. (2014). I-Nikotinamide Mononucleotide, isiPhakathi seNAD + Synthesis, Ikhusela Intliziyo kwi-Ischemia kunye ne-Reperfusion.
U-Wang, Y., et al. (2018). I-NAD + isongezelelo ihlala iKhanya iiNqobo zeAlzheimer kunye neeMpendulo zoMonakalo kwiDNA kwimodeli entsha ye-Mouse ye-AD eneSilungiso soLungiso lweDNA.
Keisuke, O., et al. (2019). Iziphumo ze-NAD Metabolism eziguqulweyo kwiMetabolic Disways. Ijenali yeeNzululwazi zeBiomedical.
1.Kutheni sifuna uNicotinamide Mononucleotide (NMN)
2.Yintoni iNicotinamide Mononucleotide (NMN)
3.Kuphi ukutya okuneNicotinamide Mononucleotide (NMN)
4.Zithini izibonelelo zeNicotinamide Mononucleotide (NMN)
6. Uphando lweNicotinamide Mononucleotide (NMN)
7.Nicotinamide Mononucleotide (NMN) Isikali
8.Ngaba iNicotinamide Mononucleotide (NMN) ikhuselekile
9. INicotinamide Mononucleotide (NMN) yongeza
Izibonelelo eziMnyama zeGarlic Extract zeZempilo kunye nokuSebenza
I-L-Ergothioneine (i-EGT): Isidlo-esenziwe ngeAntioxidant enokubakho kunyango